Miantso Anao Hamàrana Ny Fitsaratsaram-poana Miendrika Fanavahana Any Anaty Media ity Manampahaizana Santomeana ity · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jona 2014 16:08 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Español, 日本語, Português
Grada Kilomba (sary nahazoana alalana ny fampiasana azy).
Nosoratan'i Carla Fernandes, mpanao gazety, mpitarika ny Afrolis Radio (“Ny traikefa Lisbon natao araka ny fomba Afrikana“) ity lahatsoratra ity, .
Mino i Grada Kilomba, izay manam-pahaizana manokana amin'ny fandalinana momba ny fanavakavahana sy ny zavatra taorian'ny fanjanahana, avy ao amin'ny Oniversiten'i Humboldt, ao Berlin, Alemaina, fa mitàna toerana lehibe amin'ny fanamafisana ny fitsaratsaram-poana raiki-tampisaka ao an-tsaina ny media, nefa amin'ny lafiny iray, tsy misy adihevitra misokatra momba ny fanavakavahana any amin'ny haino aman-jery.
Natao tao anaty lahatsary tafatafa teo amin'i Chris Mckee sy i Tychicus Vasquez avy ao amin'ny Ragcha Media, izany fanambaràna izany, momba ny fomba hiadiana amin'ny fanavakavahana ao Eorôpa.
Nosoratan’ i Carla Fernandes, mpanao gazety, mpitarika ny Afrolis Radio (“Ny traikefa Lisbon natao araka ny fomba Afrikana“) ity lahatsoratra ity.
Foko sy Fiaviana 2 herinandro izay